Paartileen mormituu Oromoo waliin hojjechuun MM Abiyyif maal jechuu dha? | Kichuu
Paartileen mormituu Oromoo waliin hojjechuun MM Abiyyif maal jechuu dha?
•Paartileen mormituu Oromoo waliin
hojjechuun MM Abiyyif maal jechuu dha?
•Obbo Lammaa Magarsaa waliin ejjennoo
isaaniirratti dubbattanii beektuu?
Gaffiilee kanaafi kan biroofis
obbo Jawaar Mohaammad
-‘Karoora dhokataafi ijaarsa seeraa alaan
Finfinneefi N.Amaara waltuqsiisuuf hojjetamaa
jira’- Milkeessaa Miidhagaa(PhD)
-Muddama Iraaniifi Ameerikaa
Paartiileen Oromoo TPLF waliin qindoomuufi jettee warri Bilxiginnaa iyyaa jirti. Akka waan paartiileen Oromoo yoo TPLF waliin qindooman biyya balleessuuf deemanitti fakkeessaa jiru. Sababni kana godhaniif sodaa guddaa tokko qabu. Sodaan isaanii kun garuu biyyaaf yaadaniitii miti. Paartiileen Oromoo fi TPLF yoo waliin qindooman nu kuffisu sodaa jedhudha. Sodaan isaaniitis sirriidha. Akkamitti?
Akka heera biyyattii keeyyata 56 jalatti erametti kan biyya bulchu paartii ykn qindoomina paartiilee kan mana maree bakka bu’oota ummataa keessatti barcuma guddaa qabaniidha.
Jarri PP naannoo Amaaraa fi Oromoo keessaa sagalee xiqqaa argatu jedheen tilmaama. Naannoo Amaaraa keessatti ABIN harka guddaa kan argatu yoo ta’u, Oromiyaa keessatti GAMTAAn paartiilee Oromoo ni moo’atu. Kanaaf jarri PP naannolee gurguddaa lamaan irraa barcuma isaan moo’achiisu argachuu hin danda’an. Finfinnee keessatti warra EZEMA waliin harka guddaa argachuu malu. Paartiilee naannolee biroo kan akka mootummaatti waliin dalagaa jiran PP jalatti lakkaa’amu. Kanaaf barcuma 547 keessaa barcuma guddaa qabatanii ammallee biyya bulchuu itti fufuuf yaadaa jiru.
Kuni kan ta’uu danda’u yoo warri morkattootaa keessattuu paartiileen Oromoo paartiilee hafan waliin qindoomanii barcuma PP caalu yoo hin qabanneedha. Akka PP’n yaadaa jirtutti naannoo Amaaraa barcuma 138, Finfinnee barcuma 22 fi naannolee biroo irraa walitti funaannatanii harka guddaa argachuudha.
Yaadni PP kun kan abjuu ta’ee hafu paartiileen Oromoo warra biraa waliin yoo qindoomaniidha.
Paartiileen Oromoo Oromiyaa barcuma 180 keessaa guddaa ni argatu. Warri Kibbaa barcuma 114 qaban. Isaan keessaa Sidaama waliin, akkasumas TPLF barcuma 38, Somaaleen 23 qabu waliin paartiileen Oromoo yoo qindooman, PP caala barcuma guddaa argatu. Gaafas PP’n ni kufti jechuudha. Paartiileen Oromoo warra kana waliin biyya bulchuuf carraa guddaa argatu.
Adeemsi kun jara PP akka kuffisu ni beeku. Kanaaf paartiileen Oromoo warra biraa waliin akka hin qindoofne maqaa balleessuu eegalan. Sodaa maqaballeessii kanaaf jecha qindoomina uumuu akka sodaatan godhuuf yaalu. Yoo itti milkaa’an akka hin qindoomne gootee paartiileen morkattootaa barcuma PP gadi akka ta’u gooti. PP’n ammoo barcuma guddaa argatti. Akkasiin ammallee biyya bulchuuf qoophaa’aa jiru.
Kanaaf TPLF waliin biyya jeequufi jettee kan iyyaa jirtuuf. Dhugaan ummataaf yaaddee osoo hin ta’in sodaan isii barcuma sanirraa akka hin buuneefi. Carraan TPLF akka duriitti deebitee biyya gabroomfattu dhumateera. Yaaddoon guddaan TPLF ofiifuu Nafxanyaa irraa dandamachuudha. Nafxanyaan isaaniifis diina; Oromoofis diina. Nama tiyyasn na baasiif rakkataa jiru deebi’ee na gabroomfata jedhanii yaaduun abjuudha. Tooftaa itti nafxanyaan maqaa PP’n aangoo irra turuuf dalagaa jirtu kana ummatni hubachuu qaba.